प्रस, वीरगंज, १५ असार/ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । रेडियो वीरगंजले ११ औं धान दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि प्रजिअ बजिमयले कृषिमा आधारित मुुलुकमा कृषिको आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले कृषिमा आधारित देश भए पनि कृषिजन्य पदार्थको आयात हुनु लज्जास्पद कुरा भएको बताए । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढी देशको उत्पादन निकासी गर्ने सोचको विकास हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं मध्यमाञ्चल संयोजक शीतल महतोले कृषिजन्य पदार्थ पनि आयात भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले वार्षिक १४ अर्बभन्दा बढीको धानचामल आयात हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै कृषिमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन जोड दिए । कृषि वैज्ञानिक दिनेश राय यादवले गत वर्ष भन्दा यस वर्ष असार १५ मा ६ प्रतिशत धान रोपाइँ घटेको बताए । गत वर्ष असार १५ मा १५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएकोमा यस वर्ष ९ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको बताउँदै कृषि उत्पादन बढाउनका लागि राज्यले कृषिमा आधारित
भुस्याहा कुकुरका कारण राजनीतिक दलहरू र गाउँलेबीच तनाव
प्रस, वीरगंज, १५ असार/ गम्हरिया गाउँको चोकमा एकापसमा झगडा गरिरहेका कुकुरहरूका कारण आज दिनभरि गाउँ तनावग्रस्त भएको छ । समाचार विवरण अनुसार आज बिहान चिया खाने बेला चोकमा दुई टोलका कुकुरहरू लड्न थाले । कुकुरसँगै चिया खाँदै गरेका नेकपा एमाले तथा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पनि कुकुरको पक्ष विपक्षमा पुगेर आपसमा लड्न थाले । त्यसपछि घटनाले उग्ररूप लिंएको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् । एकथरी कुकुर एमाले टोलको र अर्कोथरी काङ्ग्रेस टोलका थिए । लडाइँ चर्कंदै जाँदा एमालेको कुकुर कमजोर परेपछि एमाले पक्षधरले काङ्ग्रेस पक्षधरको कुकुरलाई कुट्न थाले । काङ्ग्रेस पक्षधर पनि के कम, उनीहरूले एमाले पक्षधरको कुकुरलाई लखेटेर पिटे । दुवैतर्फका कुकुर घाइते भए । एमालेको कुकुरले बढी चोट खाएपछि उसलाई कुट्ने काङ्ग्रेस पक्षधर अवधकिशोर साहलाई एमाले पक्षधर युवाहरूले कुट्न जाँदा विवाद उत्पन्न भयो जसमा एमाले पक्षधर रामेश्वर राउत अहिर घाइते भए । सामान्य घाइते रामेश्वरको नाउक्षेमा उपचार भयो र अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गर्न खोज्दा डिस्चार्ज होइन रेफर गर्न दबाब दिएको उपचारमा संलग्न डाक्टरले बताएका छन् । घटना सम्
शिक्षा किन अनिवार्य हुनुपर्छ ?
- अनन्तकुमार लाल दास हाम्रो देश नेपाल समान र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि प्रतिबद्ध छ । यस कुरामा शड्ढा–उपशड्ढा गरे पनि कागजमा यो कुरो स्पष्ट लेखिएको छ । यस राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि सन्तोष व्यक्त गर्ने केही आधारहरू पनि छन् तर यस सम्बन्धमा धेरै बहस गर्न अझ पनि बाँकी छ । जस्तै के संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारद्वारा घोषित १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइरहेका छन् ? के यस्ता छात्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित निकायले विशेष तयारी गरेको छ ? गुणस्तरीयतालाई कसरी निर्धारित गर्ने ? के परीक्षा नलिनु वा फेल नगर्नु राम्रो नीति हो ? तर यस आलेखमार्फत् नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा शिक्षा किन अनिवार्य हुनुपर्ने हो भन्ने कुरामाथि मात्र छलफल गर्न खोजिएको हो । सबैसँग यस प्रश्नको जवाफ छ तर के हामी यसलाई अक्षरश: लागू गर्न प्रतिबद्ध छौंं ? जुन बेला हामी स्वयंसँग सोध्छौ– “यो कुरा मेरो लागि किन अनिवार्य छ” अनि यस प्रश्नको जवाफ पाइन्छ । हामी आफ्ना सन्तानलाई किन राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छौं भन्ने कुरा एउटा समाजको रूपमा सोच्दा त्यहाँ पनि जवाफ शिक्षाको उद्देश्यमा लुकिएको छ । यस कारण सबैभन्दा पहिले शिक्षाको उद्देश्य बुझ्
आज पनि हाम्रो समाजमा पानी नपर्दा भ्यागुतोको बिहे गर्ने चलन विद्यमान छ । पानी किन पर्दैन भन्ने कुरा विज्ञानको कसीमा राखेर हेर्ने जमर्को कोही गर्दैन । किनकि यस्तो प्रयास गर्दा काम गर्नुपर्छ । भ्यागुतोको बिहे गर्नु सजिलो छ, समयमा पानी परोस् भनेर आवश्यक वैज्ञानिक क्रियाशीलता दुरुह । हामीले वन–ज·लको विनाश गरेका छौं, त्यसैले पानी पर्दैन । हामीले जलाशयहरू मासेका छौं, त्यसैले पानी पर्दैन । हामीले आफ्नो सुविधाका लागि यति मात्रामा हानिकारक ग्याँसहरू यस धरतीको वायुमण्डलमा थुपारेका छौं कि विश्ववातावरणको तापमान निरन्तर बढिरहेको छ, त्यसैले पानी पर्दैन । यसमा हामी रोक लगाउन सक्दैनौं, किनकि यी यावत् परिघटना हाम्रो स्वार्थ र सुविधाजन्य मानसिकताबाट उत्पन्न हुने गर्दछ । हामी ज·ल लगाउन सक्दैनौं, हामी सुख त्याग गर्न सक्दैनौं । भ्यागुतोको बिहे गर्नु सजिलो छ, त्यही गर्दछौं । शिक्षाको प्रचार भए पनि हामी साक्षर मात्र छौं, अन्धविश्वासले हामीलाई गाँजेको मात्र होइन, यसैलाई आफ्नो स्वार्थ साधनको माध्यम बनाउन हामीलाई शर्म लाग्दैन । शिक्षित भएर पनि हामी विश्लेषक हुन सकेका छैनौं । बोक्सी हुँदैन । यो अन्ध विश्व
विभिन्न तीन स्थानमा रक्तदान ७ महिलासहित १४२ जना सहभागी
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ वीरगंज र बाराको जीतपुरमा गरी तीन स्थानमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा ७ जना महिलासहित १४२ जनाले रक्तदान गरेका छन्। जीतपुर युवा क्लबले प्रतीक दैनिक राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण भएको अवसरमा जीतपुरमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा तीन महिलासहित ४७ जनाले रक्तदान गरेका थिए। रक्तदान कार्यक्रम क्लबका अध्यक्ष मनोज साहको अध्यक्षता र गढीमाई नगरपालिका कार्यालयका सामाजिक विकास प्रमुख वीरेन्द्र वाइवाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। रक्तदान गर्ने ४७ जनालाई एक महिनासम्म निश्शुल्क प्रतीक दैनिक उपलब्ध गराउने बारा समाचार संयोजक गम्भीरा सहनीले घोषणा गरेका थिए। सो अवसरमा पत्रकार सहनीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वाइवाले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए। कार्यक्रममा जुना मगर, गाँधीदेवी यादव, टीका कुमारी, महम्मद कलाम आजाद, अनिल साह, मोहन आचार्य, अजीत कुशवाहा, रामकिशोर प्रसाद, अनिल हारा, प्रभु साह कलवार, चन्देश्वर साह कानु, भानु पासवान, दिलीप गुप्तालगायतले रक्तदान गरेका रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्राविधिक धीरेन्द्र झाले बताए। यसैगरी वीरगंजबाट प्रसारित तराई
जग्गाधनी पुर्जा चलनचल्तीमा ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी
प्रस, निजगढ, १४ असार/ दुई वर्षअघि जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरे पनि अहिलेसम्म उक्त पुर्जा चलनचल्तीमा नआएको भन्दै जग्गाधनीहरूले सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको पुर्जा हालसम्म चलनचल्तीमा नआएपछि सङ्घर्ष समितिले निजगढमा शनिवार वृहत् भेला आयोजना गरेको थियो। जिल्ला मालपोत कार्यालय बाराले पुर्जा तत्काल चलनचल्तीमा नल्याएर जनतालाई अल्मल्याइरहेको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले वितरण गरेको पुर्जा जिल्ला मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको बेवास्ताका कारण चलनचल्तीमा आउन नसकेको भन्दै भेलाका सहभागीहरूले आक्रोश पोखेका थिए। वक्ताहरूले जग्गाधनी पुर्जा चलनचल्तीमा ल्याउन अब आफूहरूसँग आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए। आयोगले वितरण गरेको करिब ४ सय जग्गाधनी पुर्जा चलनचल्तीमा आउन सकेको छैन। चलनचल्तीमा ल्याउने सम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त हुँदासमेत मालपोत कार्यालय बाराले ढिलाइ गरिरहेको सङ्घर्ष समितिकी अध्यक्ष सावित्री भारतीले बताइन्। पुर्जा चलनचल्तीमा ल्याइ राज्यले जनताको हकअधिकार सुरक्षित गर्नुपर्न
आफ्नो भविष्य र चरित्र स्वयम् निर्माण गरौं
मानिस आफ्नो भाग्यको निर्माता हो। आफ्नो उत्थान–पतन उसको वशको कुरा हो। यो तथ्य जति साँचो छ, त्यति नै साँचो के पनि हो भने वातावरणको प्रभाव मानिसमाथि पनि पर्दछ र उसको व्यक्तित्वबाट परिवार एवं समाजको वातावरण पनि प्रभावित हुन्छ। नराम्रो वातावरणमा रहेर कदाचित कसैले आफ्नो विशिष्टता साँच्न सक्छ, साथै यो सत्य हो कि वातावरणको प्रभाव पनि नपरी रहन सक्दैन। धेरै मानिसको–समर्थ मानिसको क्रियाकलापले नै वातावरणको निर्माण हुन्छ। बहुसङ्ख्यक भएर एकैनासको गतिविधिहरू अँगाल्दा दुर्बल स्थितिका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो एउटा विशेष प्रकारको अवस्था सिर्जना गर्दछन्। व्यसनी, अनाचारीहरूको समुदायले पनि यस्तो प्रभाव उत्पन्न गर्दछ, जसबाट सामान्यस्तरका मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् । यस कारण राम्रो वातावरणमा रहनु र नराम्रो वातावरणबाट जोगिनु त्यति नै आवश्यक छ, जति स्वच्छ हावामा रहने र फोहर–दुर्गन्धबाट जोगिने प्रयास गरिन्छ। त्यो प्रसिद्ध कथा जसमा एउटा गुँडबाट झिकिएका सुगाका दुई चल्लालाई दुई भिन्न ठाउँमा पालिएको थियो। त्यहाँको परिवेश अनुसार तिनीहरू पालिए । सन्तकहाँ पालिएको सुगाले ‘सीताराम–राधेश्याम’ भन्न सिक्यो भने चोर
ओमप्रकाश खनाल केही दिनअघि एमाले नेता रघुजी पन्तले एउटा अनलाइन संस्करणमा नेता माधव नेपालको अडानका कारण एकीकृत नेकपा माओवादीको अधोगति शुरू भएको अभिव्यक्ति दिए। त्यसलगत्तै महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेता केपी ओलीले माओवादीको उग्रवामपन्थविरुद्ध वैचारिक लडाइँ लडेको दलील पेस गरे । यी दुवै प्रसङ्ग एमालेको यसै साता हुन गइरहेको नवौं महाधिवेशन सन्दर्भका मात्र थिएनन्, एमाले पार्टीमा नेपाल र ओलीको नेतृत्व दौड र त्यसको आवश्यकता पुष्टिका प्रयासहरू थिए। दुवै नेताहरूले आआफ्नो लाइनको नेतृत्व स्थापित गर्ने योजनाअनुरूप सञ्चारमाध्यममा तर्क पस्किरहेका थिए। एमाले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अँगालेको वामशक्ति हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन र यसको पक्षमा मत बलियो तुल्याउने प्रयत्नहरू अस्वाभाविक हुँदै होइनन्। तर दुवै पक्षबाट नेतृत्वमा आआफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न माओवादीप्रति को कति कडारूपमा प्रस्तुत भयो भन्ने विषयलाई अघि सार्नुलाई भने कदापि स्वाभाविक भन्न मिल्दैन। जतिसक्दो माओवादीको हुर्मत लिनु नै एमाले कमान्डरका लागि अति आवश्यक योग्यता हो त ? के एमाले आफ्ना नीति र एजेन्डाहरूबाट स्खलित हुँदै गएको हो ?
जुनियर युवा रेडक्रस सर्कलको दुई दिने गोष्ठी शुरू
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ जुनियर युवा रेडक्रस सर्कल पर्साको दुई दिने गोष्ठी आजदेखि शुरू भएको छ । वीरगंजस्थित त्रिजुद्ध महावीरप्रसाद रघुवीर राम उच्च माविमा शुरू भएको सर्कलको उद्घाटन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले गर्दै युवा शक्तिहरूलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन सर्कलले उल्लेख्य भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले जुनियर रेडक्रस सर्कलले युवाहरूलाई सक्रिय गराइ समाजमा रहेका विकृतिहरूबाट बाँच्न तथा समाजमा आइपर्ने विपत्तिहरूसँग लड्ने क्षमतावान् नागरिक तयार गर्न सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा पर्साका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बरखु रजकले युवाशक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रष्फुटन गराउन जुनियर रेडक्रस सर्कल सफल भएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले समाजमा आइपर्ने विभिन्नखाले विपत्ति न्यूनीकरण गर्न क्षमतावान् नागरिक आवश्यक रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखाका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले विद्यार्थी जीवनदेखिनै गरीब, दु:खी तथा असहायहरूको सेवामा युवा विद्यार्थीलाई समर्पित गराउन सके असल समा
जीवजन्तुको सङ्गमस्थल सुके पोखरी
प्रस, निजगढ, १३ असार/ बाराको निजगढ नगरपालिका भरतगंजसिगौलस्थित बीच ज·लको सुके पोखरीको सरसफाइ कार्य शुरू गरिएको छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत् रकम निकासा भएपछि स्थानीयले समिति गठन गरी पोखरी संरक्षण गर्न थालेका हुन् । मर्मतसम्भार र सफाइ नहुँदा सड्ढटमा परेको सो पोखरी संरक्षण कार्यले वरपरका वनज·ल क्षेत्र अझै हराभरा हुने, चुरे संरक्षणमा टेवा पुग्ने सुके पोखरी संरक्षण समितिका अध्यक्ष निर्मल केसीले बताए । पोखरी संरक्षणले वनमा रहेका विभिन्न ज·ली जनावर, जीवजन्तुले सुक्खायाममा समेत पानी पाई राहत पाउने अध्यक्ष केसीले बताए । ज·लबीचको पोखरी संरक्षणले रैथाने ज·ली हात्तीको आवागमनसमेत बढ्ने समितिका सचिव केशव ढोडारीले बताए । विगतका वर्षमा पोखरी संरक्षणका निम्ति रकम आउने गरे पनि पूर्ण सदुपयोग नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । “पोखरी देखाउँछन्, पैसा कुम्ल्याउँछन्,” एक स्थानीयले नाम नछाप्न आग्रह गर्दै भने । यसपटक पोखरीमा एक साताअघिदेखि स्काभेटर लागिरहेको समितिका अध्यक्ष निर्मल केसीले जानकारी दिए । “पाँच लाख रकम आउने भनिए पनि हालसम्म दुई लाख मात्र निकासा भएको छ,” उनले भने । प्राप्त रकम सदुपय
संसद्मा महिला उपस्थिति र अधिकार
- सावित्रा सुवेदी स्वतन्त्रताका साथ राजनीति गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । हाम्रो समाजमा एउटा त्यस्तो जाति वर्ग छ, जो राजनीति के हो ? राजनीति किन गर्नुपर्छ ? के हामीले राजनीति गर्नैपर्छ र ? भन्ने सोचाइबाट ग्रसित छ । त्यो वर्ग भनेको महिला हो । वि.सं. २००८ मा मताधिकार प्राप्त गरेका महिलाहरूको राजनीतिक सुरुआत वि.सं. २०७१ सम्म आइपुग्दा केही मात्रामा भएपनि उँभो लागेको छ । राजनीति महिलाले गर्नुहुँदैन, महिला घरकी लक्ष्मी हुन्, बच्चा जन्माउने जननी हुन्, किन गर्नुपर्‍यो र महिलाले राजनीति ? भनेर घरपरिवार र समाजबाट महिलालाई राजनीति गर्न वञ्चित गरिएको थियो । कडा सङ्घर्ष र मेहनत गरेर महिलाहरूले केही मात्रामा भएपनि राजनीतिमा खुट्टा टेक्ने अवसर प्राप्त गरिछाडे । समाजले महिलालाई बन्धनमा राखेको छ । घरपरिवार र समाजसँग सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा लाग्दा पनि खासै स्थान नदिने, दिइहाल्यो भने पनि उनीहरूले बोलेका एवं निर्णय गरेका कुरालाई वास्ता नगर्ने, नसुन्ने थुप्रै उदाहरणहरू छन् । नेपाली महिलाको राजनीतिक अवस्था अति नै चिन्ताजनक र दयनीय भए तापनि महिलालाई राजनीतिमा उचित स्थान भने सरोकार
- उमाशङ्कर द्विवेदी उद्यालक मुनिका कहोड नामले प्रसिद्ध एउटा शिष्य थिए । उनले आफ्नो गुरुदेवको बडो सेवा गरे । सेवाबाट अत्यन्त प्रसन्न भई गुरुले उनलाई जम्मै वेदको अध्ययन गराइदिएर आफ्नी सुजाता नामकी कन्यासित विवाह पनि गरिदिए । केही समय बितेपछि सुजाता गर्भवती भइन् । त्यो गर्भ अग्निको समान तेजस्वी थियो । एक दिन कहोड वेदपाठ गरिरहेका थिए । यत्तिकैमा गर्भस्थ शिशुले गर्भबाटै भने– “बुवा, तपाईं रातभरि वेदपाठ गर्नुहुन्छ तर सो पाठ ठीकसँग हुने गर्दैन ।” शिष्यहरूका बीचमा आफ्नै गर्भस्थ शिशुको आक्षेप सुनेर पिता क्रोधित भएर गर्भस्थ शिशुलाई शाप दिंदै भने– “तँ आमाको गर्भमा भएर पनि यस प्रकारले बा·ो–बा·ो कुरा झिकिरहेछस्, त्यसैले त आठ ठाउँबाट बा·ो भएर जन्मेस् ।” अष्टावक्र पेटमा बढ्न थालेपछि सुजातालाई अत्यन्त पीडा हुन थाल्यो । उनले एकान्तमा पतिसित धनको जोहो गरेर ल्याउनका लागि प्रार्थना गरिन् । कहोड धनका लागि राजा जनकको दरबारमा गए । तर त्यहाँ शास्त्रार्थमा पार·त बन्दी नामक विद्वानले उनलाई पराजित गरी शास्त्रार्थको नियमानुसार उनलाई पानीमा डुबाइदिए । उद्यालक मुनिले यो समाचार थाहा पाएर छोरी सुजातालाई जम्मै व्यह
गणतन्त्र नेपाल: पहिचान र प्रभाव
- चन्द्रकिशोर गणतन्त्र’ नेपालकालागि नयाँ चिनारी भएको छ, सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर चिनिने नेपालले गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा नूतन छवि प्राप्त गरेको छ । जनान्दोलन ०६३ को पहलमा नयाँ नेपालको प्रारूप कोरिन लाग्दा ‘गणतन्त्र’ नेपालको सामाजिक जीवन पद्धतिको अ· हुन पुगेको छ । वास्तवमा गणतन्त्र जनान्दोलनको प्रमुख नारा थियो । गणतन्त्र प्राप्त गरेपछि यसले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा नवसंरचनाको शिलान्यास त गरेकै छ, मौलिक अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ । सङ्घीय प्रणाली मूलत: गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली हो, मधेसी आन्दोलनले पनि नेपाल गणतन्त्रात्मक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो । विगतमा अरू पनि पूरक आन्दोलन हुँदै गए, जसले नेपालबाट राजतन्त्र हटाउने अपेक्षा राख्दै आएको थियो । संविधानसभाबाट जनान्दोलनको अपेक्षाले अनुमोदन पाएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकको राजनीतिलाई मूल बाटोमा ल्याउन गणतन्त्र रोजेको थियो । निरङ्कुश राजतन्त्रको १२ पुस्ते शासनले नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र सम्मानको यात्रालाई फराकिलो लोकमार्ग उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले नेपाली स्वतन्त्रताको यात्रा गणतन्त्रको
गुदाका रोग र क्षारसूत्र उपचार
- डा. रमेश मिश्र अनुचित खानपान र रहनसहनले शरीरमा विभिन्न रोगहरू हुन्छन्, तीमध्ये मलद्वारमा हुने रोगहरू पनि हुन् । लामो समयसम्म उत्पन्न हुने असमान्य पुरिष गति अर्थात् कहिले कब्जियत हुनु, कहिले दिसा जानुले मलद्वारका रोगहरू उत्पन्न हुन्छन् । यसको अतिरिक्त मलद्वारमा हुने रोगहरू वंशाणुगत पनि हुन्छन् । भगन्दर (ाष्कतगबि), अर्श–बवासिर (एष्भिक) र परिकर्तिका (ाष्ककगचभ) सामान्यत: मलद्वारमा हुने रोगहरू हुन् । आयुर्वेदमा भगन्दर, अर्शलाई महागुद अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ । यी रोगहरूको जीर्णता एवं पुनरावृत्ति भइरहने भएकोले रोगी शारीरिक एवं मानसिकरूपमा दु:ख सहन बाध्य हुन्छ। भगन्दर (ाष्कतगबि) एउटा व्रजमार्ग हो, जसको भित्रको प्वाल गुदा अथवा मलाशयमा खुल्दछ एवं बाह्य प्वाल मलद्वारनिर खुल्दछ । यसमा एउटा प्वाल मात्र हुन्छ, जसलाई नाडी (क्ष्लगक) भनिन्छ । सामान्यत: यो भगन्दर पीडिका अकस्मात् विदीर्ण भएर हुन्छ अथवा अकुशल व्यक्तिबाट उपचार गरेर भेदन गर्दा हुन्छ । बीचबीचमा पीडायुक्त शोध वंक्षण प्रदेशमा असुविधा एवं रगतस्राव यसको लक्षण हो । मलद्वार सङ्क्रमण, अस्वस्थ तान्तव धातुको उपस्थिति एवं व्रजयुक्त अ·ला
मुलुकलाई इमानदार नेता चाहिएको छ
- वैद्यनाथ ठाकुर मानवीय गुणहरूले नै एक्काइसौं शताब्दीमा मानवलाई महान् बनाएको छ । मानिस प्रकृतिमा जीव विकासको क्रममा विकसित स्तनधारी जनावर नै हो । तर जनावरबाट मानिसलाई छुट्याएको स्वभाव भनेकै मानवीयता हो । धर्तीमा एक मात्र यस्तो प्राणी हो जसले मानव मात्रको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण धरतीकै लागि सकारात्मक चिन्तन राख्ने गर्दछ । इतिहासमा भएको कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिने र सो अनुसार वर्तमानलाई परिमार्जन गर्ने तथा सुदूर भविष्यको गोरेटो–यात्रालाई सहज र सुखमय बनाउन योजना निर्माण गर्ने क्षमता केवल मानिसभित्र मात्र रहेको छ । यस अर्थमा एउटा मानिस जब आम मानिसको नैतिकताभन्दा माथि उठ्छ अनि त्यसले मानिसहरूबाट अपार स्नेह प्राप्त गर्दछ । त्यसैले कतिपय सन्दर्भमा भन्ने गरिन्छ मानिस नै भगवान् हो । प्रत्येक वस्तु, गुण वा स्वभावको विपरीत हुनु पनि स्वाभाविक हो । राम्रो मानिस भएपछि नराम्रो मानिसको पनि दुनियाँमा अस्तित्व हुन्छ नै । मानवीयता शून्य मानिस पनि मानवकै बीच छ । आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति, प्रगतिको लागि अन्य मानिसलाई दु:ख दिने, शोषण गर्ने, उस्तै पर्‍यो भने घाँटीसमेत काट्न अघि सर्ने मानिसहरू नै वास
बुद्धि कहिले फिर्ने ?
सुन्दर स्वस्थ नगरको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमध्ये उद्यान पनि एक हो । वातावरणीय दृष्टिले पनि घनाबस्तीको बीचमा पार्क तथा उद्यान अनिवार्य छ । भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न वा अन्य कुनै प्रकोपको बेला जोखिममा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नका लागि यस्ता खुला स्थानहरूलाई सेल्टर प्वाइन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आपत्विपत्को बेला मात्रै होइन, दैनिक जीवनबाट दिक्क भएको बेला मानसिक पुनर्ताजगीका लागि पनि उद्यान अति आवश्यक छ । कुनै नगरमा बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूले समेत त्यहाँ पार्क वा खुला स्थल छ कि छैन जानकारी लिने गर्छन् । पार्क तथा उद्यान एकमात्र त्यस्तो स्थल हो, जहाँ खुशी हुँदा, दु:ख पर्दा बालक, वयस्क, वृद्ध, नर हुन् या नारी, धनी या गरिब सबैका लागि आपद्विपद् होस् या मनोरञ्जन जुनसुकै अवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वीरगंज उपमहानगरपालिकाको जनघनत्व र शहरीकरणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हरेक वडामा एउटा ठुलो पार्क र टोलटोलमा ससाना पार्कहरू हुन जरुरी छ । अव्यवस्थित शहरीकरण, मापदण्डविपरीतका निर्माणहरू, औद्योगिक एवं व्यापारिक चाप र सामाजिक एवं धरातलीय र भौगोलिक अवस्थाले पनि यहाँ प्रदूषण र विपद्जन्य जो
दलित जनजाति पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन
प्रस, वीरगंज, १२ असार/ दलित जनजाति पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनको आज घण्टाघरमा खुला सत्र सम्पन्न भएको छ। खुला सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले कार्तिक ८ गतेभित्र संविधानको मस्यौदा जनताको घरघरमा पुग्नुपर्ने बताए। उनले माघ महिनामा संविधान जारी गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको बताए। पासवानले अन्य पार्टीको भूमिकाको कारण समयमा संविधान नआउने ठोकुवा गर्दै संविधान बनाउने कार्यमा सरकार र संसद्मा रहेका राजनीतिक दल, संसद् बाहिर रहेको राजनीतिक दल, अर्ध भूमिगत र भूमिगत दलहरू बाधक हुने उनले बताए। यी दलहरूलाई गोलमेच सम्मेलनमार्फत् सहमतिमा नल्याए संविधान नबन्ने उनले बताए। उनले मधेसी पार्टीलाई इङिगत गर्दै उनीहरू रकमी खेलमा डुबेका कारण पहिचान गुमाउँदै गएको बताए। धर्म निरपेक्ष र सङ्घीयतासहितको गणतान्त्रिक संविधानभन्दा पछाडि हाम्रो पार्टी कुनै पनि हालतमा नहट्ने पासवानले बताएका थिए। नेपालका दलित, जनजाति, मधेसी, आदिवासीलगायत अन्य पिछडावर्गको समान सहभागिता हुने गरी संविधानमा सहभागिता नगराए सशक्त सङ्घर्षमा ओर्लने उनले बताए। प्
सडकको दुरवस्थाले बारावासी प्रताडित
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १२ असार/ भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा तराईमा सडक परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सडक समयमैं नबन्न सक्दा कलैया नगरपालिकाका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न कठिनाई भइरहेको स्थानीयहरूको भनाइ रहेको छ। मानमत–मटिअर्वा सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने सो सडकमा ठाउँठाउँमा एक–एक गहिरो खाल्टो भएको र सो खाल्टोमा पानी जमी पोखरी बन्दासमेत कलैया नगरपालिका कार्यालयले मरम्मत समेत नगरेकोले निकै समस्या भोग्नुपरेको अखिलका जिल्ला अध्यक्ष इमरान आलम बताउँछन्। सदरमुकाम कलैयाको मुख्य भरतचोकसँगै जोडिएको सो सडकको ठाउँठाउँमा पोखरीजस्तै खाल्डो तथा फोहोरको डुङ्गुर जमेको हुँदा त्यसको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्न नसक्दा लाजमर्दो अवस्था सृजना भएको स्थानीय रविन पासवानले बताए । वर्षायाम शुरु भएपछि यी खाल्डोमा वर्षाको पानीसँगै नालाबाट निस्कने दुर्गन्धित पानी जम्मा हुँदा सदरमुकाम कलैया आउने र जाने गाडीका साथै सर्वसाधारणलाई पैदल हिंड्नसमेत अप्ठयारो हुने गरेको युवा सङ्घ नेपाल बाराका प्रचार विभाग प्रमुख अनिता साहले बताइन्। नेपाल सरकारले यो सडक बनाउन विगत चार वर्षको अन्तरालमा मुआब्जा, विद्युत् मरम्म
जनता रिसाएकै हो
मुलुकको चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणाम मुख्य दलहरूको अपेक्षाविपरीत आएको छ। चारवटा क्षेत्रमध्ये यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने एमालेले एक सीट मात्र सुरक्षित राख्न सक्यो। सात महिना पहिले अर्थात् बितेको मङ्सिर ४ गते भएको चुनावमा उक्त क्षेत्रमध्ये दुई क्षेत्र एमाले र दुइ क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसको थियो। दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बितेको चुनावमा उक्त क्षेत्रका मतदाताले जिताएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुवै यति बेला सत्तामा छन्। मङ्सिर ४ को चुनाव धाँधलीपूर्ण भयो भनेर तेस्रो ठूलो राजनीतिक दल एमाओवादीले आवाज उठाइरहेको छ। सत्ता काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेकोले सत्ताको प्रभाव पर्छ र अघिल्लो चुनावभन्दा उपचुनावमा राम्रो मत पाइन्छ भन्ने अपेक्षा नेका पक्षको थियो। गृह मन्त्रालयलगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेको एमाले नेका प्रधानमन्त्रीले खासै चर्चायोग्य काम गर्न नसकेकाले जनमत आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वासमा थियो। मुख्य प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमाओवादी उपनिर्वाचन नजिते पनि मङ्सिर ४ भन्दा सम्मानजनक मत आउनेमा ढुक्क थियो। किनभन
श्रीमन्नारायण मिश्र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लगाउने काम विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। पञ्चायतको तीस वर्षमा भारतको विरोध नै नेपाली राष्ट्रवादको आधार बनेको थियो। पञ्चायती शासनको अवसानपश्चात् भारत विरोधी राष्ट्रवादको मान्यतालाई मूल राजनीतिक नारा बनाउने काम गरे देशका वामपन्थीहरूले। भारतको विरोध गर्नु नै नेपाली राष्ट्रवाद हो भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्ने देशका वामपन्थी र पूर्व पञ्च राजावादीहरू यथार्थमा देश र जनतालाई अन्योलमा राख्न चाहन्छन्। नेपालप्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्ति रहेको मानसिकताले ग्रसित यस्ता कथित राष्ट्रवादीहरूकै कारण देशले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको छैन। यथार्थमा दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारत नेपालको सहयोगी, शुभेच्छु र घनिष्ठ मित्र राष्ट्र हो तथा नेपालप्रति सधैं उसको सदाशयता एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण रहिआएको छ । यस कुराको पुष्टि गर्दछ, चार दशक अघिको एउटा घटनाले। कुरा वि.सं. २०२० साल तिरको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभागको आयोजनामा विश्वविद्यालयकै सभाकक्षमा एउटा विचारगोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो र त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अ
आर्थिक विकासमा संसदीय व्यवस्थाको योगदान
वीरेन्द्रप्रसाद यादव यतिखेर शासकीय स्वरूपको बहस चरमचुलीमा पुगेको छ। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमा कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री त कसैले मिश्रित शासकीय प्रणालीको वकालत गरेका छन् । अभ्यास हुँदै आएको संसदीय व्यवस्थालाई प्राय:ले असफल भन्दै परिवर्तन गर्ने धारणा राखेका छन्। राज्यको नयाँ संरचना भइरहेको अवस्थामा शासकीय स्वरूपको परिवर्तनको सन्दर्भमा छलफल हुनु अस्वाभाविक होइन तर राजनीतिक आर्थिक, सामाजिकलगायत विकासलाई केन्द्रमा राखेर निचोडमा पुग्नुपर्छ। कुनै पनि व्यवस्थाको सफलता असफलताको मूल्याङकन आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको तुलनात्मक अध्ययन गरेर हुनुपर्छ। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिले पनि तुलना गर्दा संसदीय व्यवस्था खासै असफल भएको छैन किनभने संसदीय व्यवस्थाकै भरमा सञ्चालित राजनीतिले ६ दशकको अन्तरालमा राजतन्त्र जस्तो बलियो जग बसाएको निरङ्कुश शासन उन्मूलन गरेको छ भने हरेक शोषित, उत्पीडित वर्ग समुदायको बराबर हिस्सेदारी कायम गर्न राज्यलाई बाध्य तुल्याएको छ। संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने नेतृत्वको क्रियाकलापले केही असन्तुष्टि उत्पन्न भएको मात्र हो।
विपन्नमैत्री बजेटको खाँचो
शीतल महतो समावेशी आर्थिक विकासको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि अहिले गरिब तथा विपन्नमैत्री बजेटको आवश्यकता रहेको छ। गरिब तथा विपन्नमैत्री बजेट भनेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग एवं समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेश गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो। दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका र आवाज खोसिएकाहरूको सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको आवाज र मुद्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नु पनि हो। तर नेपाली समाजमा व्याप्त क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, सामाजिक, धार्मिक र अल्पसङ्ख्यक तथा लैङिगक भेदभावको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि विगतमा गरिएका योजनाबद्ध विकास प्रभावकारी हुन सकेन। फलस्वरूप राष्ट्रले दिगो र तीव्र आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकेन। नेपालको मुख्य र प्रमुख समस्या गरिबी, विपन्नता र बेरोजगार नै हो। नेपालका करिब ३० दशमलव ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी बढ्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा रोजगारका अबसरहरूको